Nezvedu - Hebei Weierli Animal Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Hebei Weierli Animal Pharmaceutical Group Co, Ltd, yakagadzwa muna 2001, inyanzvi inogadzira inoita mukutsvagisa, kusimudzira, kugadzira, kutengesa uye basa remishonga yemhuka. Isu tiri muShijiazhuang Guta rine nyore kutakura kuwana. Weierli Boka rinobata mafekitori mana ebazi, imwe kambani yekutengesa uye imwe kambani yekuyedza:
1.Hebei Weierli Mhuka Chemishonga Boka Co, ltd (2001)
2.Hebei Weierli Biotechnology Yakatemerwa
3.Hebei Pude Animal Mishonga Co., ltd (1996)
4. Hebei Iine Biology Technology Co, ltd (2013)
5 .HeBei NuoB Kutengesa Co, ltd (2015)
6. Hebei Yunhong Kuedza Technology Co, Ltd.
Yedu huru yezvigadzirwa zvezvipfuyo mutsara unosanganisira jekiseni, poda, premix, yemuromo mhinduro, piritsi, uye disinfectant. Yakatsaurirwa kune yakasimba yemhando yekudzora uye inofungisisa vatengi, vashandi vedu vane ruzivo vanogara varipo kuti vakurukure zvamunoda uye nekuvimbisa kuzere kwevatengi kugutsikana.Mumakore apfuura, kambani yedu yakazivisa nhevedzano yezvigadzirwa zvemberi zvekugadzira zvinosanganisira Guruva-yemahara yekudyisa uye yekuongorora muchina, Hopper vachisimudza chisanganiso,. Otomatiki yekuzadza muchina, otomatiki kurongedza muchina; Hunhu hwekuongorora michina inosanganisira HPLC, UV, Multifunctional microbial otomatiki kuyera analyzer, Constant Climate Chamber, single-munhu single-side biological yekuchenesa Laborator, Pamusoro pezvo, isu takawana GMP chitupa, Zvakatipima ongororo chitupa.
Isu tinogara tichitevedzera mwero weGMP, tichisimbirira musimboti we "yakakwira-kugona, kudzidza uye kuhwina-kuhwina sangano" uye kuburitsa yakakwira giredhi, yakachengeteka uye inoshanda mishonga. Unyanzvi uye hwakasimba timu yekutengesa inoita yedu yekushambadzira chikamu ichiwedzera mune yakakwira kumhanya.
Kutengesa zvakanaka mumaguta ese nematunhu akakomberedza China, zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune vatengi muAsia, Africa, uye Central America nyika. Uye isu tinopedza kunyoresa muUnited Arab Emirates, Peru, Egypt, Nigeria nePhilippines. Isu tinogamuchirawo maOEM neODM mirairo. Kunyangwe kusarudza chigadzirwa chazvino kubva kukatalog yedu kana kutsvaga rubatsiro rweinjiniya kuchikumbiro chako, unogona kutaura kunzvimbo yedu yebasa revatengi nezve zvaunoda. Weierli vanhu vanogona kugara vachikunda, nekuti ivo vanogadzira iyo ngano nekumhanyisa, kuongorora nzvimbo nehungwaru, uye kufamba mune ramangwana nesainzi uye tekinoroji.